DAAWO: Guddiga Doorashooyinka Jubbaland oo si adag ugu jawaabay Beesha Caalamka.
KISMAAYO(P-TIMES) – Guddiga Doorashooyinka Madaxa banaan ee Jubbaland ayaa qoraal ka kooban 3 waraaqood oo ay u direen Beesha Caalamka, gaar ahaana Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ay uga jawaabeen su`aalihii lasoo weydiiyey labo maalin kahor.
Guddigu waxay si cad u sheegeen in ay mandate ama awood u leeyihiin qabashada doorashada Madaxweynaha iyo tan baarlamaanka oo uu sidaas qabo dastuurka u degsan dawlad gobaleedka Jubbaland, waxayna sheegeen in ay horey arrimahan iyo aqbalaadooda mucaaradka iskugu raacsanaayeen.
Guddiga ayaa sidaas oo kale, waxay daaha ka rogeen in cabashada Beelaha qaarkood ay tahay wax gudahooda oo aysan dhankooda waxba saameyn iyo faragalin ah uga imaanin maamulka Jubbaland, gaar ahaana Madaxweynaha tartamaya.
Jubbaland, ayay sheegeen in ay ka qabsoomayso doorasho xor iyo xalaal ah oo ay dhinacyada oo dhan ku tartamayaan ayna taasi tusaale cad u tahay arrimaha socda.
Guddigu, waxay cadeeyeen in musharaxiinta Madaxweyne-nimada ee aan wali isdiwaangalin waqtigu ka dhacay, iyagoo iyagu ahaa kuwii keenay markii hore sharuudaha iyo in lasoo hormariyo arrimaha diwaangalinta musharaxiinta Madaxweyne-nimada Jubbaland.
Doodaha ku saleysan qabashada doorashada ayaa ahayd muhiimada ugu weyn ee ay isku difaaceen guddigan, waxayna si cad u sheegeen in ay xooga saarayaan sidii ay si mideysan uga shaqeyn lahaayeen arrimaha doorashooyin xalaal ah oo dhaca gudaha bishan.
Geedi socodka ama Jadwalka doorashada ayay sheegeen in ay horey u shaaciyeen, haddana ay ku shaqeynayaan oo uu gabo-gabo yaha xulitaanka xubnaha baarlamaanka, maadaama dastuurku u siinayo damaanada ku wajahan cidii ka gaabsata xulida xubnaheeda in ay buuxinayaan Isimadda ugu dhaw.